နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီများအား Linear Spectrum သဏ္ဍာန်ဖြင့် ခွဲခြားလေ့လာခြင်း – ခင်မမမျိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီများအား Linear Spectrum သဏ္ဍာန်ဖြင့် ခွဲခြားလေ့လာခြင်း – ခင်မမမျိုး
Posted by kai on Sep 12, 2013 in Contributor, Columnist, Politics, Issues |9comments
အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီဆိုတဲ့ စကားလုံးကို (၁၈) ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာ ပြင်သစ်ပညာရှင် Antonie Destutt de Tracy က Eléments d’Idéologie ဆိုတဲ့ ပရောဂျက်မှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ De Tracy က အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီဆိုတာကို အတွေးအခေါ်များ၏ သိပ္ပံ (science of ideas) အဖြစ် ညွှန်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဇီဝဗေဒ (ဘိုင်အိုလော်ဂျီ) ကဲ့သို့သော သိပ္ပံပညာရပ်တခုအဖြစ် အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီ ဆိုတဲ့ သိပ္ပံပညာရပ် ပေါ်ထွက်လာစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် (၁၉) ရာစု ကာလရောက်တော့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စကားလုံးတရပ်အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
လူမှုသိပ္ပံပညာရပ်ကတော့ အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီဆိုတာကို နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ coherent set of ideas အနေနဲ့ ရှုမြင်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဆိုရာမှာ လက်ရှိတည်ရှိနေတဲ့ စနစ်ကို ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပြင်ဆင်မှု၊ ဖယ်ရှားမှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ ပါဝင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ် လူမှုသိပ္ပံပညာအရ အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီကို နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့် အတွေးအခေါ်များ စုစည်းထားသော လှုပ်ရှားမှုဦးတည်သော ယုံကြည်မှုစနစ် (action-oriented belief system) အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို ထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပညာရှင် Seliger ဆိုသူက အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီအားလုံးမှာ existing order ကို ကမ္ဘာ့ရှုထောင့်ကနေ ရှုမြင်သုံးသပ်မှု၊ အနာဂတ်ကမ္ဘာမှာ အသုံးပြုသင့်တဲ့ နိုင်ငံရေးသဏ္ဍာန်၊ ကောင်းမွန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာအမြင်များနဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုကို မည်သို့မည်ပုံ လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း အကြံပြုချက်တွေ ပါဝင်ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပညာရှင် Matthew Festenstein နဲ့ Michael Kenny ဆိုသူတို့က နိုင်ငံရေး အိုင်ဒီရော် လော်ဂျီဆိုတာ ဒီမိုကရေစီ၊ နိုင်ငံတော်၊ သဘာဝ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ လွတ်လပ်မှု စတဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောတရား (political concept) တွေကို ရှူထောင့်တခုချင်းစီကနေ ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ framework ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီ အမျိုးအစားများကို ပညာရှင်များက ခွဲခြားဖော်ပြကြရာမှာ သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။ Linear Spectrum သဏ္ဍာန်က နိုင်ငံရေး အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီတွေကို လက်ဝဲ၊ လက်ယာခွဲခြားပြီး ဖော်ပြထားပြီး၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ (Socialism)၊ လစ်ဘရယ်ဝါဒ (Liberalism)၊ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒ (Conservatism) နဲ့ ဖက်ဆစ်ဝါဒ (Fascism) စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဆယ့်ကိုးရာစုခေတ်ဆိုရှယ်လစ်အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီမှာ တော်လှန်ရေးသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ ရောစပ်ပါဝင် နေပါတယ်။ အဓိက ရည်မှန်းချက်ကတော့ ဈေးကွက်ဖလှယ်မှုပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ အရင်းရှင်စီးပွားရေး စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး၊ ဘုံပိုင်ဆိုင်မှုသဘောတရားအပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်မှုနဲ့ အစားထိုးရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွေးအခေါ် အယူအဆများကို အဓိက လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး တွေးခေါ်ပညာရှင်ကတော့ ကားလ်မာ့က်စ် ဆိုသူဖြစ်ပြီး၊ သူဟာ နှစ်ဆယ်ရာစုခေတ် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို မျိုးစေ့ချခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ့်ကိုးရာစုနှောင်းပိုင်းကာလမှာတော့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး ဆိုရှယ်လစ်အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီ (Reformist Socialism) တွေ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီအရ အလုပ်သမားလူတန်းစားတွေရဲ့ လုပ်ခလစာ၊ အလုပ်ခွင်အခြေအနေတိုးတက်ရေးများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ အရင်းရှင်လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းသို့ အလုပ်သမားလူတန်းစားများကို ပေါင်းစည်းရေး သဘောတရားများ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနဲ့ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံရေးပါတီများလဲ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး ဆိုရှယ်လစ်အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီက ပါလီမန်နိုင်ငံရေးကို အသုံးပြုပြီး၊ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်သို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆင့်ကဲတိုးတက် ပြောင်းလဲခြင်းကို ထောက်ခံအားပေးပါတယ်။ ဒီအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီက နိုင်ငံရေး တွေးခေါ် ပညာရှင် Robert Owen (၁၇၇၁-၁၈၅၈)၊ Charles Fourier (၁၇၇၂-၁၈၃၇) နဲ့ William Morris (၁၈၅၄-၁၈၉၆) တို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်များနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ethical socialism ဆိုင်ရာ သဘောတရား များနဲ့ Eduard Bernstein ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ revisionist Marxism သဘောတရားများကနေ မြစ်ဖျားခံ စီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။
(၂၀) ရာစုကာလရောက်တော့ ဆိုရှယ်လစ်လှုပ်ရှားမှုမှာ အုပ်စုနှစ်ခု ကွဲပြားလာပါတယ်။ တော်လှန်သော ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ (revolutionary socialism) ယုံကြည်လက်ခံသူများဖြစ်တတဲ့ လီနင်နဲ့ ဘော်ရှီဗစ်တွေက ကွန်မြူနစ်တွေလို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သတ်မှတ်ပြီး၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး သမားများကတော့ reformist socialists တွေလို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသမားတွေက ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံသော နိုင်ငံရေးကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကြပြီး၊ အဲဒီကနေတဆင့် ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဝါဒ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီတခု ထပ်မံပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
လူတဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ လစ်ဘရယ်ဝါဒရဲ့ အခြေခံတန်ဖိုးဖြစ်ပြီး၊ ဒီတန်ဖိုးဟာ တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ တရားမျှတမှုတွေထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ လစ်ဘရယ်ဝါဒီများက ယူဆကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လွတ်လပ်ခွင့်ဟာ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းက လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီး၊ လူတဦးရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ဟာ အခြားလူတဦးရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရန် စောင့်ထိန်းဖို့ လိုအပ်ကြောင်း လစ်ဘရယ်ဝါဒီတွေးခေါ်ပညာရှင်များက သတိပေးပြောဆိုထားကြပါတယ်။ လူအများရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေသော လူတဦးချင်းစီရဲ့ အမြင့်မားဆုံးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ လစ်ဘရယ်ဝါဒရဲ့ တန်ဖိုးလို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒီလို နိုင်ငံတော်မှ ပြည်သူအား မိဘမှ သားသမီးကို စောင့်ရှောက်ခြင်းကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်သောသဏ္ဍာန်၊ တာဝန်ဝတ္တရား၊ hierarchy စတဲ့ သဘောတရားများအပေါ် အခြေခံထားတဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒကို paternalistic conservatism လို့ သတ်မှတ်ခေါ်တွင်ကြပါတယ်။
ဥရောပကွန်ဆာဗေးတစ်များက နောက်ထပ်ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ အခြေခံသဘောတရားတရပ်ကတော့ ခရစ်ယန်ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောတရားကို ဂျာမန် ခရစ်ယန် ဒီမိုကရက်များရဲ့ လူမှုဈေးကွက် ဒဿနိကဗေဒ (social market philosophy) မှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဒဿနိကဗေဒရဲ့ အခြေခံတန်ဖိုးကတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်များပြုလုပ်ရာမှာ ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာ များကို အသုံးပြုရာက ရရှိလာတဲ့ အမြတ်အစွန်းများကို လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြန်လည်အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယန်ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားက ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ သမဂ္ဂများနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အကြားမှာ လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု (social partnership) ကို အရေးကြီးတန်ဖိုး တခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အချို့တွေးခေါ်ပညာရှင် များကတော့ ဒါကို compassionate conservatism လို့ ဖွင့်ဆိုဖော်ပြကြပါတယ်။
ဖက်ဆစ်ဝါဒဟာ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးနှောင်းပိုင်းကာလမှာ အနောက်ကမ္ဘာရဲ့ နိုင်ငံရေးကို လွှမ်းမိုး လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီ ဖက်ဆစ်ဝါဒီများက ” ၁၇၈၉ ဟာ သေဆုံးသွားပြီ “ ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံကို ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးနှောင်းပိုင်းကာလ နိုင်ငံရေးတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ တိုးတက်မှု၊ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ တန်းတူညီမျှမှု စတဲ့ သဘောတရားတွေကို ဖက်ဆစ်ဝါဒီတွေက ခေါင်းဆောင်၊ အာဏာ၊ ဟီးရိုးဝါဒ၊ စစ်ပွဲ၊ အာဏာ စတာတွေနဲ့ အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဖက်ဆစ်ဝါဒကို အရင်းရှင်ဝါဒ၊ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ ကွန်ဆာဗေးတစ် ၀ါဒနဲ့ လစ်ဘရယ်ဝါဒ စတဲ့ နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီများ အားလုံးကို ဆန့်ကျင်သော ၀ါဒတခုအဖြစ် ပုံဖော်ထားကြပါတယ်။
ဖက်ဆစ်ဝါဒီတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အားလုံးကတော့ တထပ်တည်း မတူညီပါဘူး။ အီတလီ ဖက်ဆစ်ဝါဒက အစွန်းရောက် နိုင်ငံတော်ဝါဒ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေဟာ နိုင်ငံတော် အပေါ်မှာ ပြန်လှန်မေးခွန်းမထုတ်တဲ့ အလုံးစုံလေးစားမှုနဲ့ သစ္စာရှိမှု ရှိရပါတယ်။ ဖက်ဆစ်တွေးခေါ် ပညာရှင် Gentile (၁၈၇၅-၁၉၄၄) က “အစစအရာရာဟာ နိုင်ငံတော်ပဲ ဖြစ်ရမယ်။ နိုင်ငံတော်ကို မဆန့်ကျင်ရဘူး။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပြင်ပမှာ မဟုတ်ရဘူး” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီ အမျိုးအစားများကို အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ linear spectrum၊ သဏ္ဍာန်နဲ့ ခွဲခြားဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းများသာမကပဲ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီ၊ လက်ယာသစ်၊ လက်ဝဲသစ်နဲ့ မင်းမဲ့ဝါဒ စတာတွေ ပါဝင်တဲ့ alternative spectrum၊ အမျိုးသားကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ နိုင်ငံတကာကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၊ နိုင်ငံတကာ ဆိုရှယ်လစ် ၀ါဒ၊ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဝါဒ၊ ဆိုရှယ်ရီပတ်ပလီကန် ၀ါဒ၊ အရင်းရှင်ဒီမိုကရက်တစ်ဝါဒ၊ အရင်းရှင် ရီပတ်ပလီကန်ဝါဒ၊ တိုးတက်သောနီရိုလီဘရယ်ဝါဒ၊ ကွန်ဆာဗေးတစ် နီရိုလစ်ဘရယ်ဝါဒ၊ နီရိုလစ်ဘရယ် ၀ါဒ၊ အမျိုးသားရေးဝါဒ စတာတွေ ပါဝင်တဲ့ Moral Matrix သဏ္ဍာန် စသည်များဖြင့်လဲ လေ့လာသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ကျော်ကတော့ ၀ါဒတခုပဲ သိဒယ် သဂျီးရဲ့ …
နိုင်ငံရေးမှာအမြဲ update ဖြစ်နေမှ ။
update မလုပ်နိုင်ရင် အစစ သူများနောက်ကျန်ခဲ့မယ်။
ဒီဝါဒတွေလည်း တဖြည်းဖြည်uးpdate လုပ်ရင်း ပေါ်ပေါက်လာ
ရတာပါ။ ခုupdate ဖြစ်နေတာက ဒီမိုကရေစီပေါ့။
ဒါလဲ မနက်ဖြန် ဒိတ်အောက်မလား သထက်ခါဒိတ်အောက်
ဘယ်သူကပိုကောင်းသလဲ။ ဘယ်ဟာက လူတွေပိုလိုချင်သလဲ
ပေါ့။ ခုတလောဒီမိုကရေစီ ဆိုတာတောင်လူတွေ သိပ်မပြော
ကြတော့သလိုပဲ။ ဒီမိုကရေစီတောင်မြန်မာမှာ ဒိတ်ပဲအောက်
သွားသလား? မထားတတ်လို့ ပုပ်သိုးသွားသလား? မသုံး
.. ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိနေတဲ့ – ၃ ယောက်ရှိရင် ၂ ပိုင်းကွဲတဲ့ ဝါဒ၊ ကိုယ်အကြိုက်လိုက်မပြောရင် ဟိုဖက်နဲ့ ပေးစားချင်တဲ့ဝါဒ၊ ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ထက် အပြစ်ဖို့ဖို့သာ အရသာတွေ့တဲ့ဝါဒ၊ ကြုံရင်ကြုံသလို ဆွမ်းကြီးလောင်းချင်ကြတဲ့ဝါဒ၊ စတာတွေကိုလည်း နာမည်တပ်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်..
ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ အစ်ဇင်
မဖြေရှင်းပြစ်တင် အစ်ဇင် နဲ့
ကိုယ်က တော့ ကိုယ့် ဝါဒ အသစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး အဲဒီ ကိုယ်ပိုင် ဝါဒ သစ်ကို ဖြန့် ချင်တာပဲ သိတယ် ။
ရှိရှိ သမျှ ဝါဒတွေကို
လိုက် ကြည့်နေရုံပဲ တတ်နိုင်သေးဒယ်
နောကက်တစ်ခေါက်မက ထပ် ဖတ်ဦးမယ်ဗျို့ 
ဆိုတော့ကာ အရေးကြီးတာက ကိုယ်တွေက
ဘာ ism တွေလည်းဆိုတာ သိဘို့လိုလာဘီ
လှေကားဖိနပ်ချွတ်မှာ ဖိနပ်တစ်ဖက်မှောက်နေရင် မကြိုက်ဘူး
ခရီးသွားတဲ့အခါ ချောချောရှူရှူရှိအောင် ယုံးပတီသီးချက်စားတယ်
လက်ဝါးယားရင် ဖင်နှိုက်တယ် ( ဟုတ်ပါဘူးဘွာ ) လာတ်ကောင်းတယ် မှတ်တယ်
ကွမ်းစားရင် ကွမ်းရွက်ထိပ်ကို နည်းနည်းဆိတ်ပြီး ပြစ်လိုက်တယ်
ဘီအီးကစ်ရင် လက်ကလေးနဲ့ စွတ်ပြီး နည်းနည်းခါလိုက်တယ်
ဘိုးတော်ချဲနံပါတ်ပေးလို့ထိုးတာ 20 ဘိုးပေါက်ဘူးတယ်
ကျုပ်က ဖက်ဆစ်လား ဆိုရှယ်လစ်လား လစ်ဘရယ်လား ကွန်ဆာဗေတစ်လား ??????
မကောင်းတာဖြစ်ရင်..” ခြောက်မြှောက်ကြီး”ကို စော်ကားလို့ဖြစ်တယ်ထင်ပြီး…
.. ကောင်းတာဖြစ်ရင်လည်း..” ခြောက်မြှောက်ကြီး” ကိုပသလို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်..
“ခြောက်-မြှောက်ကြီး “= ငရဲနဲ့ခြောက် ဘုံနဲ့မြှောက်သူ
နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီများအား Alternative Spectrum သဏ္ဍာန်ဖြင့် ခွဲခြားလေ့လာခြင်း
(၁) ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဝါဒ (Social Democracy)
(၂၀) ရာစုအစောပိုင်းကာလတွေမှာတုန်းက ဒီဝါဒကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သော ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ (reformist socialism) အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ (၁၉၅၉) ခုနှစ်မှာ ဂျာမန်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက မာ့က်စ်ဝါဒကို တရားဝင်စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး၊ “ဖြစ်နိုင်မှုရှိလျှင် ပြိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်ရှိလျှင် ကြိုတင်စီမံခြင်း” ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အလုပ်သမားပါတီကလဲ ပါတီရဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ယုံကြည်ချက်ကို တန်းတူညီမျှခြင်းဆိုတဲ့ သဘောတရား အပေါ်မှာပဲ ကန့်သတ်ချက် သတ်မှတ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။
(၂) လက်ယာသစ် (New Right)
ဒီဝါဒနှစ်ခုဟာ နိုင်ငံတော်မှ ဈေးကွက်သို့ ဦးတည်သော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို ဦးဆောင်ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့အတွက် ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း သက်ရောက်လွှမ်းမိုးမှု ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လက်ယာသစ်ဝါဒဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အတွေးအခေါ်နှစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ လစ်ဘရယ်ဝါဒနဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒ နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်း ပေးခြင်းကိုတော့ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။ ဒီဝါဒနှစ်ရပ်အကြားမှာ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ၊ တင်းမာမှုတွေ ရှိတာကြောင့် ပေါင်းစည်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုချက်တွေလဲ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ နိုင်ငံရေး တွေးခေါ်ပညာရှင် Andrew Gamble က ” လွတ်လပ်သောစီးပွားရေးအဆောက်အအုံနဲ့ အင်အားကြီး သော နိုင်ငံတော် (the free economy and the strong state) “ အဖြစ် ရပ်တည်မှုဟာ အကောင်းဆုံး ပေါင်းစပ်နိုင်သော နည်းလမ်းအဖြစ် အကြံပြုထားပါတယ်။
(၃) လက်ဝဲသစ် (New Left)
လက်ဝဲသစ်အတွေးအခေါ်တွေရဲ့ မျိုးစေ့က ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှာ de-Stalinization လုပ်တဲ့ ကာလမှာ အစပြုလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉၅၆) ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ Nikita Khrushchev ရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ “On the Cult of Personality and Its Consequences” ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါဝင်ခဲ့တာက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ ဂျပန်ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့ကို အတွေးအခေါ် ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ မာ့က်စ်ဝါဒီပညာရှင်တွေက သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဗဟိုဦးစီးဝါဒကို ဆန့်ကျင်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုဆန့်ကျင်လာကြတဲ့ ကွန်မြူနစ်များ ပေါင်းစည်းမိရာက လက်ဝဲသစ်ဝါဒ ပေါ်ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးအစမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကွန်မြူနစ်ပညာရှင်များနဲ့ တက္ကသိုလ်အခြေပြု လေ့လာရေးအုပ်စုဝင်များနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အခြေပြု လေ့လာရေးအုပ်စုများ ပေါင်းစည်းပါဝင်လာကြပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာတော့ “nouvelle gauche” ဆိုတဲ့ သဘောတရားတရပ်က (၁၉၅၀) ကာလတွေမှာ ကတည်းက ပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပေါ်ထွက်နေမှုက France Observateur ရဲ့ အယ်ဒီတာ Claude Bourdet နဲ့ ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ Claude Bourdet ဆိုသူက စတာလင်ဝါဒနဲ့ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဝါဒတို့အကြားနဲ့ စစ်အေးတိုက်ပွဲဘက်နှစ်ဘက်အကြားမှာ ရှိနိုင်တဲ့ တတိယ သဘောတရားတရပ်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ပြင်သစ်ရဲ့ လက်ဝဲသစ်ဝါဒဖြစ်ပြီး၊ ဗြိတိန်က ဒီစကားလုံးကို ဆက်လက်သုံးစွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ (၁၉၆၀) ခုနှစ်မှာ New Left Review ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်တစောင် စတင်ပေါ်ထွက် လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကာလတွေမှာတုန်းက လက်ဝဲသစ်ဝါဒီအများစုဟာ Campaign for Nuclear Disarmament မှာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ (၁၉၆၁) နှောင်းပိုင်းကလာရောက်တော့ ဒီလှုပ်ရှားမှု အားပျော့လာတဲ့အတွက် ဂျာနယ်ထုတ်ဝေရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များအကြားမှာ မရေရာမှုနဲ့ ကွဲပြားမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာပြီး ဂျာနယ် ထုတ်ဝေရေးကို မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များရဲ့ လက်ထဲကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။
(၁၉၆၀-၇၀) ကာလတွေမှာတော့ အမေရိကန်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှာ လက်ဝဲသစ်ဝါဒ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ လက်ဝဲသစ် ၀ါဒီတွေက အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုထက် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုဇောင်းပေးကြပါတယ်။ မာ့က်စ်ဝါဒရဲ့ ပစ္စည်းမဲ့ လူတန်းစားများအပါအ၀င် လူထုလူတန်းစားပေါင်းစုံရဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားမှု သဘောတရားများကို ဆန့်ကျင်ပြီး၊ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုကိုသာ လှုပ်ရှားမှု ပါဝါအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တို့မှာ ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ လက်ဝဲသစ်ဝါဒ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ဟစ်ပီလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်း အလိုက် ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၆၈) ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုတွေ အရှိန်မြင့်လာပြီး၊ ကျောင်းသားဦးဆောင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
(၄) မင်းမဲ့ဝါဒ (Anarchism)
မင်းမဲ့ဝါဒကို နောက်ထပ်လွှမ်းမိုးစေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကတော့ socialist communitarianism ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွေးအခေါ်ထဲက လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှု စတဲ့ သဘောတရားတွေကို မင်းမဲ့ဝါဒီတွေက လက်ခံကြပါတယ်။ လူမှုသွေးစည်းညီညွတ်ရေး (social solidarity) ရရှိရေးအတွက် လူသားတွေရဲ့ စွမ်းရည်တွေ လိုအပ်ချက်ကို အာရုံစိုက်တဲ့ Collective anarchism ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီတရပ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
ဒီအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီကို ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်မင်းမဲ့ဝါဒီ Pierre-Joseph Proudhon ဆိုသူက လွတ်လပ်သော လယ်သမားများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ လက်မှုပညာရှင်များ ပါဝင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ငယ်လေးတွေဟာ အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ အမြတ်ထုတ်မှုတွေ၊ မတရားမှုတွေ မပါဝင်သော တရားမျှတပြီး တန်းတူညီမျှတဲ့ စနစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ဘ၀ကို သူတို့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ မင်းမဲ့ဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ အခြားတွေးခေါ်ပညာရှင်များကတော့ Noam Chomsky နဲ့ Murray Bookchin ဆိုသူတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီ အမျိုးအစားများကို အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ alternative spectrum၊ သဏ္ဍာန်နဲ့ ခွဲခြားဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းများသာမကပဲ အမျိုးသားကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ နိုင်ငံတကာကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၊ နိုင်ငံတကာ ဆိုရှယ်လစ် ၀ါဒ၊ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဝါဒ၊ ဆိုရှယ်ရီပတ်ပလီကန် ၀ါဒ၊ အရင်းရှင်ဒီမိုကရက်တစ်ဝါဒ၊ အရင်းရှင် ရီပတ်ပလီကန်ဝါဒ၊ တိုးတက်သောနီရိုလီဘရယ်ဝါဒ၊ ကွန်ဆာဗေးတစ် နီရိုလစ်ဘရယ်ဝါဒ၊ နီရိုလစ်ဘရယ် ၀ါဒ၊ အမျိုးသားရေးဝါဒ စတာတွေ ပါဝင်တဲ့ Moral Matrix သဏ္ဍာန် စသည်များဖြင့်လဲ လေ့လာသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ထုတ် ပဲ့တင်သံမှာ ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။